Indlela yokunika umthamo kwiinwele kwiingcambu: iindlela ezilula zokunika umthamo kwiinwele kwiingcambu - imfundiso yevidiyo
Indlela yokunika umthamo kwizinwele kwiingcambu?
I-hairstyle echanileyo kunye neyobukhulu isoloko ibangalisa imibono yabantu, iba ngumona wabanye abafazi, kwaye inika umnikazi wayo ukuzithemba ekuthandeni kwayo. Ewe, ukudala umfanekiso ogqwesileyo, unako ukuya kwi-salon enobuhle, apho oomatshini bezoshishino zabo baya kwenza ukuba izinwele ezithandekayo zibe ziluhlaza kwaye zikhangele.
Kodwa kuthekani ngamantombazana angenayo indlela okanye ithuba lokuya kuma-stylists amahle? Ayikho imfihlo yokuba inwele yezinwele ezintathu ingadalwa ekhaya.
Yintoni enokuyenza ukuze unike ivolumu kwiinwele?
Into yokuqala yokuqala kunye nokukhethwa kwezilwanyana ezinononophelo. Kufanelekile ukunyamekela loo mveliso ephawulwe "umthamo". Kusuka kwixabiso elingabonakaliyo lwemveliso yokunyamekela, unokukhetha i-shampoos kunye ne-conditioners ne-silicone ekubunjweni. Iquka ifilimu engabonakaliyo zonke iinwele, ngenxa yento intloko yeva ebonakalayo iphakamileyo. Qaphela ukuba kuyimfuneko ukuhlamba intloko yonke imihla, kuba i-silicone inomhlaba wokutsala uthuli kunye nezinye iincinci ezincinci. Ukuba kunokwenzeka, ungathenga iimveliso zobugcisa - i-shampoos, iibhola kunye nezigulisi zokunika umthamo. Iinqununu zabo eziyinhloko zii-keratini kunye nama-protein, apho izinwele nganye ziquka. I-Shevelura ayiyi kuba yinto enqabileyo kuphela, kodwa iphinde iphilile, i-fragility kunye necandelo eliphambili liya kuncipha. Iimali ezifanelekileyo kwezi njongo zi-gels kunye ne-mousses. Iifomula zokukhanya kufuneka zikhethwe ngenxa yeenwele ezincinci nezibuthakathaka, ngokuba zininzi kwaye ziqine, iindlela zokulungiswa ngokugqithiseleyo zilungele. I-Mousse okanye i-gel kufuneka isetyenziswe kwiingqungquthela, ukuqala phakathi kobude bayo kwaye iphele ngeengcambu. Emva koko uyomise ngomisi osikiweyo onwele kwaye ujikeleze ngokujikeleza, uqondise ukuphuma kweengcambu zomoya. Enye inketho yokusebenzisa i-hairdryer ukunika impembelelo efanelekileyo kukusetyenziswa kwe-diffuser okanye umbhobho wombhobho okhethekileyo.
Indlela yokunikezela iinwele ezinobungqina kwiingcambu?
Kwiingcambu zanconywa kwaye kwangexesha lolo suku lwalugcina umlo, amaninzi amantombazana enza iinwele. Musa nje ukubandakanyeka kakhulu kule nkqubo - ngaphandle koko umthamo ozayo uza kubonakala ungaqhelekanga. Iziphumo ezilungileyo zinokufezekiswa ukuba usebenzisa izimonyo ezikhethekileyo ukunika umthamo omkhulu. Ukwenza oku, i-mousse epraysi okanye elula isetyenziswe kule ndawo, emva koko eyomile ngomisi osikiweyo, uhlawule ingqalelo ekhethekileyo kwingingqi ye-basal. Unokuba lula ukwenza le nkqubo ngokukhupha intloko yakho, emva koko ukuhamba komoya oshisayo kuqondiswa kwiingcambu ukuya ekupheleni. Ukusombulula le ngxaki ekhaya, ungasebenzisa abaluki bezinwele ezinkulu. Kufuneka uzilungiselele kwizinwele ezomileyo, uze ulungise umphumo ngokumisa okushisayo kunye nomisi osikiweyo. Emva kokususa i-curlers, kufuneka ufefe iingcambu zincinci nge-varnish. Iseluleko esilula siya kunika ubuqaqawuli kunye neengqungquthela ezingapheliyo nezingaphephekanga. Ukuba akukho nzekayo imihla ngemihla ukuhlupheka ngenxa yokudala intloko enhle yeenwele, unokukwazi ukuhamba ngeenkqubo ezilandelayo:
ukudweba kwexesha elide, ukudala ukusetyenziswa kweemichiza;
Iimvume zokuvumela ukugcina umthamo ixesha elide kwiingcambu, kodwa le nkqubo iya kufuneka iphindwe rhoqo emva kweveki 3-4.
Indlela yokwenza umthamo omkhulu ngeenwele ezinde?
Ukuba le ntombazana inalo i-luxury, ngoko ke kukho iindlela ezininzi ezinokukunceda ekujongeni le ngxaki:
Ukusebenzisa isinyithi ngesiseko esiphezulu, unako ukukhawuleza, uhlawule ingqalelo ekhethekileyo kwingcambu yommandla.
Ebusuku yenza umsila ophezulu, ukuwubopha ngebhanti ebanzi e-elastic band, ukuguqula i-tourniquet kwaye uyilungise i-gum. Olu qhinga luya kunceda ukudala i-hairstyle ye-three-dimensional ubusuku omnye.
Ukunyamekela iinwele zakhe ezinde, intombazana kufuneka ikhumbule ukuba iibhalms kunye nezicwangciso ezingenako ukusetyenziswa kwiindawo ezingcambu, ngaphandle koko ziya kuba nzima kakhulu.
Ukuba awukwazi ukujamelana neenwele ezide ekhaya, okanye ungenayo ixesha elaneleyo, unako ukuya kwisearoni enobuhle uze wenze ukongezwa. Izinwele ezinjalo zinokuhlamba, zijikiweyo, zilungiswe ... Oko kukuthi, yonke into iyafana neyabo, kuphela ngoku iphindwe ngamaxesha amaninzi!
Indlela yokwenza umthamo ophezulu ngaphandle kokuwuxuba?
Enye yeendlela ezilula ukudala umthamo kwisithsaba kusetshenziselwa i-curlers, iimveliso zokubumba, i-dryer kunye ne-verarn of fixing. Endaweni efunwayo, ngokulula amanzi ngamanzi kwaye usebenzise inani elincinci lomzobo. Amandla kwi-vertex emoyeni kwi-curler-stickers okanye i-thermo-curlers, sebenzisa isomisi seenwele ukukhawulezisa inkqubo yokomisa. Emva kokulinda embalwa imizuzu ukupholisa ngokupheleleyo imicu, susa ii-curlers uze ufefe iindlovu kwi-vertex nge-lacquer yokulungiswa okuqinileyo. Ezi ndlela ezilula ziza kwenza kube lula ukwenza iinqwelomoya ezimnandi ekhaya.
Yiyiphi inwele yentsimbi efanelekileyo?
Iintlanzi zeebhokhwe ezide
Iindlela zokulahleka kwesisindo
Umntwana wam ufunga ngubani omele atyala kunye nento enokuyenza
Kwiminyaka engama-90 eyadlulayo, uNonna Mordyukova wazalwa: siyakhumbula iindima ezithandwa ngumdlali
Ama-eggplant agxile ebusika